सन्तान नभएर तना’वमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने गर्नुस यि उपायहरू – Online Khabar 24
सन्तान नभएर तना’वमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने गर्नुस यि उपायहरू
January 24, 2021 by admin admin
सबै आमा बुवालाई सन्तानको इच्छा हुन्छ नै। तर केही कारणले कुनै आमा बुवालाई सन्तान सुख प्राप्त हुँदैन।
यस्ता आमा बुवाले निरास नभइ केही तरिका अपनाउनु पर्छ। जसबाट स’न्तान प्रा’प्तिको सम’स्या ह’ट्न सक्छ।
जसको जन्म कुण्डलीमा राहु पाँचौं स्थानमा हुन्छ उनीहरुलाई सन्तान सुखमा सम’स्या हुन्छ। यो सम’स्याबाट छुट’का’रा पाउन मुख्य ढोकाको तलपट्टी चाँदीको पत्र बनाएर राख्नुस् त्यसबाट स’न्तान हुने संभावना रहन्छ।
यदि धेरै उप’चार गर्दा पनि सन्ता’न भएनन् भने ४० दिनसम्म पाँच वटा मुला राति श्रीमतीको सिरानीमा राख्नुस्। र, ती मुलालाई भोलिपल्ट भगवान शिवको मन्दि’रमा चढाउनुस्। यो प्रक्रिया तीनदेखि चार पटक सम्म गर्नुस् तपाइँको सन्ता’न हुन्छन्।
निस’न्तान दम्पत्तिलाई सुनौलो रङको कौडा पनि निकै उपयोगी हुन्छन्। यसकालागि आइतबार पाँच कौडालाई लिएर मन्त्र उच्चा’रण गर्नुस् र यी कौडीलाई पहेँलो रुपमा राखेर श्रीमतीको कम्मरमा बाँध्नुस्। यसो गर्दा चाँडै सन्तान हुने विश्वास गरिन्छ।
सन्तान प्राप्तिका लागि बिहीबारका दिन गँहुको पिठोको डल्ला बनाएर त्यसमा चनाको दाल र थोरै बेसार मिसाएर गाईलाई खुवाउँदा बृहस्पती खुशी हुनछन्। जसका कारण चाँडै सन्ता’न हुने विश्वास गरिन्छ।
Prevरातिमा कस्तो सपना देख्नुहुन्छ ? यी १० सपना देख्नुभयो भनृे हुनेछ अति नराम्रो
nextझुक्कियर पनि नगर्नुहोस् आइतबारको दिन यी काम, कारण यस्तो